Iifoto zeRose kunye nentsingiselo yazo: uphawu lothando | Ukuzoba
Intsingiselo yeetatoo rose
UAntonio Fdez | | Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Namhlanje, i-rose iye yaba yenye yezona zinto ziphambili kwihlabathi le tattoo. Ngenye yeempawu ezibonakalayo kunye nezithandwayo. Kwaye ubungqina boku kukuba, nokuba kukodwa okanye njengenxalenye yoyilo, akukho nzima ukufumana itattoo apho ikhoyo irose, nokuba ngoyena mntu uphambili kuyilo okanye unendima yesibini. Inkqubo ye- iitattoo ze rose zizinto zemihla ngemihla. Imalunga ne- Iitattoo zeentyatyambo uninzi luceliwe kwizitudiyo ze tattoo. Ukongeza, ithandwa ngokulinganayo kumadoda nabasetyhini.
Kwaye nangona Ukuzoba Sithethile ngazo ngezihlandlo ezininzi, kuhlala kunomdla ukuthetha ngentsingiselo entle kunye nenzulu kunye nophawu oluchazwe kule ntyatyambo. Kodwa, Iyintoni intsingiselo yeetatoo rose? Kuya kuxhomekeka kwinkcubeko nakwingingqi yeplanethi esiya kuthi sithethe ngayo omnye okanye omnye umqondiso.
Umzekelo, eNtshona i-rose imele into enye ne Iitattoo zeentyatyambo empuma. Isimboli esaziwayo nesasazekileyo sothando. Kwelinye icala, ii-tatoo ze-rose zikwangumqondiso wothando, ubunyulu kunye nobunyulu. Ukunika i-rose yindlela yokubonisa imvakalelo yethu yothando komnye umntu.
1 Iitattoos zeeroses ezinemibala eyahlukeneyo
2 Iifoto zeRose Tattoos
Iitattoos zeeroses ezinemibala eyahlukeneyo
Ngaba uyayazi loo nto Intsingiselo ye-rose tattoos iyahluka ngokuxhomekeka kumbala banantoni na? Masenze amagqabantshintshi ngentla kweentsingiselo eziphambili ezinxulumene ne roses ngokombala wayo:
Iiroses ezimthubi: zidityaniswa luvuyo nolonwabo.
Iiroses ezimhlophe: Zingumqondiso onamandla wonqulo okanye wobunyulu.
Iiroses ezipinki: Ezinye zeentsingiselo zezi roses uvelwano kunye nokunconywa.
Iiroses: iiorenji: intsingiselo yayo inxulumene nomthandi.
Iiroses ezibomvu: lufanekisela uthando kunye nothando.
Ukuba besinokuhamba sibuyele emva ngexesha kwaye sibekhona ngexesha ubukhosi baseRoma okanye bamaGrike babukuncopho yabo, singafumanisa kuqala ukuba i-rose imele ubuhle nothando. Ngokuchasene noko, kuba amaKristu okuqala irosa yaba luphawu olucekisekayo kuba babetshutshiswa ngamaRoma kwaye babemnqula. Nangona kunjalo, ethubeni amaKhristu amancinci aqala ukutshintsha umbono wabo ngale ntyatyambo ukuze "bamkele" intsingiselo esiyaziyo namhlanje.
Iifoto zeRose Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Intsingiselo yeetatoo rose
Banokuxela ukuba yintoni intsingiselo yesabile ehlaba irosa ukuba inesiko okanye inentsingiselo
Buthetha ntoni ubuso bomfazi one rose neminwe
IiTattoo zeentsiba zaseIndiya
Iminyaka esemthethweni yokwenza umvambo eSpain, uloyiko lwabanye abazali